Mbola very anjavony ny nofy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ekena marindrano fa tena nisy tolona,
malagasy maro, indrisy zary sorona!
F'ilay nitolomany navadiky ny sasany,
ankosotra, tsy izy, tena sarintsariny!
Fahafahana a? Aiza nefa izany e?
Geja, fahantrana, no hita sesilany!
Tsindry hazo lena, tsy lazaina intsony,
"ny fiandrianany" aza, namidin-drilerony!
Tsy nahoan'ialahy ny ra nipatrapatraka,
ny vola no niteny, niofo ho mpanjanaka!
Namoritra vahoaka, nandroba ny hareny,
tsy hafa nefa ialahy fa gasy ray sy reny!
Raha nahay nanangatra ireo mahery fo,
tsy sahy angamba ialahy, nanao kitoatoa!
Tadidio anefa: ny atao io mitampody,
mba gasy ihany ialahy, dia tsy mataho-tody!
Nafatratra toa charbon,
Tao anatin’ny wagon,
Avy eo narefotra ny basy,
Firifiry re no maty?
Tifitifitra tsy ankiato,
No indrao nanakoako,
Tao no niantso hoe: vonjeo!
Tsisy nihaino izany feo.
Fa ry vazaha sy sonegaly,
Vonona ny hampijaly,
Ny rà nandriaka tsy nohenoiny,
Efa vato re ny fony.
Amanaliny no lavo,
Tao anatin’ny iray andro,
Nanao sorona ny tena,
Niady ny fahaleovantena.
Ireo havan’izy ireny,
Gina tsy nahaloa teny,
Fa ny fo no nitomany,
Ny ao anaty no naharary.
Taona maro aty aoriana,
Ny tantara tsy mangina,
Ilay tolona fahiny,
Tsy voafafa ankehitriny.
TAHIRIsoa Just’1 (22/03/2016)
Tra ta ta ta ta...!!!
Rotika ny nofon'ireo mahery fo
Potika sy levona ny vatana malia...
Ny rà niraradraraka, nandriaka ihany koa...
Maro ireo nianjera, be ny nikodia!
Nanako dia nanako ny feon'ny "kalaky"
Tambadiky ny avoana sy tendrombohita avo...
Natao fitifi-borona ny Gasy mba nitaky...
Nikatsam-pahafahana kanefa indrsy, lavo!
Hoy ny basy nifandrimbona nanala ny ain'ny Gasy
Nanala ny ain'ny Gasy ! Gasy tia ny Taniny...
Nisotro ny mangidy, niharitra ny mafy...
Ho fitakiana soa, ho an'ny Tany maminy!
in, TSANTA 27 martsa 2018